Sida Gabadha Looga Dhigo Jeceylka WhatsApp-Dhammaan Talooyinka Iyo Khiyaamada | Niman qurux badan
Alicia tomero | | Waqtiyada firaaqada, Lamaanaha iyo Galmada, Tiknoolaji
Shabakadda bulshadu waa faa'iidada ugu weyn ee lagu xiriirin karo ama la haasaawe qof kale. Haddii aad u baahan tahay naag ka qabso WhatsApp waa inaad ogaataa inay jiraan khiyaamo yar oo aad codsan kartaa sheekadiina. Waxaan ognahay inay aad uga macquulsan tahay in mar mar la wada xiriiro iyadoo la isticmaalayo app-kan oo aan la isticmaalin habka wicitaanka taleefankaaga.
Si aad si sax ah ugu isticmaasho waxaan ku siin doonaa fursadaha ugu fiican qof ku guulaysto. In sidaas loo yeelo waa arrin si degan u isticmaal iyada oo aan la fileyn in wada-hadalladu ay noqdaan kuwo aad u socda oo aan la filayn in qofka kale uu khadka si joogto ah ugu jiro.
2 Muuji xiisaha, laakiin ha siin awood badan
3 Isticmaal emoticons
4 Iska ilaali higgaadaada iyo habka aad wax u qorto
5 Ciyaar waxyaalaha qarsoon
Ujeeddadaadu waa waxa ay tahay in ay ku caddaadaan waxa aad u ogolaanayso naftaada xad la'aan ama xad la'aan. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qofka aad u qorayso uu yahay qof dabiici ah iyo taas waxaad la falgali doontaa danahooda iyo dareenkooda.
Bilawga wada hadalka waxaa laga yaabaa inay muhiim tahay. 'Hello' fudud waxay noqon kartaa xishood badan oo ka tagaya sugidda waxay noogu jawaabi doonaan, laakiin had iyo jeer waxaad abuuri kartaa xiiso. Maxaad u malaynaysaa a sidee tahay? Sidee u dhacday? ama 'waan ku xasuusanayay'. Waxay muujin kartaa xiisaha, laakiin waxaan hubnaa inaad jeceshahay.
Haddii aadan la kulmin iyada qof ahaan waad awoodaa isticmaal kaftan, Had iyo jeer shaqeeya Waxaad sheegi kartaa sawir ama wax la xiriira waxaad aragtay. Isticmaal su'aalaha aan laga jawaabin, sida mala-awaalku xiise ayuu qabtaa ee qofka kale. Waxaad ka hadli kartaa muusikada, meelaha aad booqatay ama waxaad sheegi kartaa weedho aad xasuusato. Xitaa waxaad ku dhejin kartaa heerarkaaga, si ay sidoo kale u abuurto xiiso oo ay rabto in ay u isticmaasho shakhsi ahaan.
Muuji xiisaha, laakiin ha siin awood badan
Waa caadi inaad muujiso xiisahaaga oo aad bilowdo inaad la samayso nooc ka mid ah dhibka gabadhaas. Ku dumarka waxay jecel yihiin daacadnimo iyo feejignaan, laakiin adigoon xad dhaaf ahayn. Ma jecli inaan arko wiil had iyo jeer way ku lumaan hadalka oo gabadh u sasabaso, ama ha ku sii jirto khadka internetka maalinta oo dhan iyada oo sugaysa wada hadal.
Isku day inaad taas ka dhigto inuu arko wada hadaladu maaha kuwa ugu muhiimsanlaakiin inaan fool ka fool kula kulmo. Dantaadu waa inay joogtaa, waa inaad u soo bandhigtaa shirkaddaada mar kasta oo aad xasuusiso taas waxaad u joogtaa waxaan u baahanahay. Faahfaahin fiican ayaa ah in la xasuusto marka uu shaqada ka tago ama uu dhameeyo maalinta fasalka, wakhtigaas waxaad weydiin kartaa sida uu u baxay.
Way fiicantahay in la isticmaalo emoticons si aad u caddayso waxa ay dareemayso ereyo la'aan. Waxaan runtii jecelnahay inaan aragno sida dareenka qofka aan la falgalayno uu yahay. Laakin talo ahaan Ma wanaagsana in si joogto ah loo isticmaalo, waxay u ekaan kartaa caruurnimo.
Iska ilaali higgaadaada iyo habka aad wax u qorto
Higaada waa waxa ugu fiican ee la iska ilaaliyo marka wax la qorayo. Waxay noqon doontaa qalabkaaga ugu fiican marka aad wada hadlaysid, tan iyo markii daryeel naxwaha waa xaqiiqo dumar badan quseeysa. Sidoo kale ha isticmaalin luqad adag taasi waxay ku keeni kartaa naagta raaxo darro. Aad bay u mahadsan yihiin fariimaha taxadir leh iyo kuwa rasmiga ahMa aha inay u muuqdaan kuwo weerar ku ah ama isla weyn.
Dhinaca kale, ha badin. Qofna ma jecla inuu wax badan akhriyo oo eego cutubyo aad u dhaadheer. Waa in toos ah oo koobanSheekadu ha u socoto si dabiici ah oo fudud. Marka qoraallada la qoro kuwa aad u dheer, waxay u ekaan kartaa qof quus ah, oo aan lahayn nolol bulsheed, sidaas darteedna waxay ku siinaysaa dareen culus. Waxaad hubin kartaa sida uu u hadlo iyo haddii uu jecel yahay tayada sare ama xajmiga qoraallada. Haddii ay aad u saxsan tahay oo ay jeceshahay jumlado gaagaaban, markaa waa inaad ku jawaabtaa tusaaleheeda.
Ciyaar waxyaalaha qarsoon
Waa xeelad wanaagsan oo soo baxday la abuuro jillaab qofka kale. Muddo ayay qaadanaysaa in aad ka jawaabto fariimaha uu soo diro oo u daa in uu hoos u dhigo sida aad tahay wax yar. Noloshaada bulsheed, shaqadaada, hiwaayadahaaga ... waxaas oo dhan waxaa lagu ogaan karaa taariikhda koowaad, haddii uu runtii rabo inuu kula kulmo. Laakin inta ka horaysa ka dhig in uu kugu xidho isku day sii taabashada sirtaas.
Waxaad odorosi kartaa su'aalaha qaarkood, ogow sida loo sugo inaadan isla markiiba uga jawaabin iyo had iyo jeer hubanti la'aan abuuraysa. Waa wax qabsada oo jawaab u doona wax kasta oo aad soo bandhigto. Sidaas darteed ayaa maskaxda ku hayn doona waayo waxaad ku xujaysay inuu yahay qof dahsoon.
Isticmaal magacooda wada hadalka, ha isticmaalin wax yar ama ha ku kalsoonaan bixinta naanaysyada. U muuji kalsoonida wax kasta oo aad sheegto iyo sidoo kale xiisaynayso, inkastoo qayb ahaan. Sidaynu horeba uga faalloonnay, waa arrin wada hadal dhexdhexaad ah, ha moodin inaad quustay. Shukaansigu waa ku habboon yahay, qoraallo kaftan ah, weedho dhiirigelin ah iyo waxoogaa jacayl gelinaya. Ha iloobin ka hor intaadan dirin inay tahay inaad sameyso dib u eegis waxa aad qortay, Si aan khaladaad loo samayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Sida Looga Dhigo Gabadha Jacaylka WhatsApp